Flightsgbọ elu ọhụrụ abanye Jamaica dị mkpa maka mgbake mgbake nke ndị njem
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ gbasara Jamaica » Flightsgbọ elu ọhụrụ abanye Jamaica dị mkpa maka mgbake mgbake nke ndị njem
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Njem azụmahịa • Caribbean • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Akụkọ gbasara Jamaica • News • Iwughachi • Tourism • Okwu Nlegharị Anya • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ dị iche iche
Ụgbọ elu New Air Canada na -abata Jamaica
Onye Minista njem nlegharị anya nke Jamaica, Hon. Edmund Bartlett, ekwuputala na mgbakwunye ụgbọ elu ọhụrụ n'agwaetiti ahụ site na nnukwu ahịa dị mkpa maka mbọ mgbake njem, ebe Jamaica nabatara ụgbọ elu si n'ahịa njem Canada na Europe.
Air Canada abịaghachila na Jamaica mgbe ọnwa isii gachara iji ụgbọ elu kwa izu na -eji ụgbọ elu Dreamliner ya na atụmatụ ịga kwa ụbọchị n'oge adịghị anya.
Njikwa Jamaica nke ọrịa na ogo ngwaahịa ya enyerela mba a aka nke ọma.
Ụgbọ elu ọhụrụ na -abịa n'ọnụ ọgụgụ nke ga -abawanye nke ukwuu na ntule maka afọ ugbu a na ihe dịka nde 1.8.
Na Sọnde (Julaị 4), Jamaica hụrụ nloghachi nke Air Canada si n'ahịa Canada na Condor si Frankfurt, Germany, jiri ụgbọ elu Switzerland si Zurich, nke Edelweiss Air na -arụ, mere atụmatụ na mgbede Mọnde, ihe niile rutere n'ọdụ ụgbọ elu Sangster International. . Minista Bartlett nabatara ọbịbịa ha nke o kwuru na ọ “dị oke mkpa na mbọ mgbake ndị njem” ka emechiri njem ụgbọ elu mba ụwa n'ihi COVID-19.
Air Canada abịaghachila mgbe ọnwa isii gachara iji ụgbọ elu kwa izu na -eji ụgbọ elu Dreamliner ya na atụmatụ ị ga -aga kwa ụbọchị n'oge adịghị anya, ebe ntụgharị Condor na -abụ kwa izu ruo Septemba na ụgbọ elu Zurich bụ nke mbụ maka ụgbọ elu na -aga n'etiti obodo abụọ a.
Onye ozi ahụ kwuru na isi okwu ndị a mesiri ike "na njikwa Jamaica nke ọrịa na n'ezie ịdị mma ngwaahịa anyị debere yana njikọta anyị chekwara n'oge obere oge a, mere anyị nke ọma" na mgbake na -ewere ọnọdụ ọbụna karịa ngwa ngwa. atụwo anya.
Minista Bartlett rụtụrụ aka na n'ime ọnwa atọ gara aga ndị bịarutere izu ụka dị mkpa na nkezi ndị ọbịa 15,000 n'ime ụbọchị atọ, na ụgbọ elu ọhụrụ na-abata na ọnụ ọgụgụ ahụ ga-abawanye nke ukwuu na amụma maka afọ ugbu a ihe dị ka nde 1.8 .
Nke a, ọ gbakwụnyere, pụtara na ọrụ na ntinye ego na -alaghachi n'ike n'ike karịa ka a tụrụ anya ya. “Obi dị anyị ụtọ na atụmanya nke uto na -aga n'ihu, ana m ekwughachi na mmepe ụlọ ọrụ na -aga n'ihu, uto akụ na ụba anyị na ịmaliteghachi ọrụ bụ ọrụ dịịrị anyị niile, anyị ga -aga n'ihu na -edebe usoro iwu. , na -akwado ụkpụrụ njikwa dị mma nke mpaghara niile, gụnyere Resilient Corridors nke gosipụtara na ọ bụ otu ngwa ahịa dị ike maka Jamaica. "
Ndị otu ndị njem nlegharị anya nke Jamaica (JTB) ekerewo oke n'ịre ahịa ụgbọ elu na onye isi mpaghara JTB maka Canada, Angella Bennett kwuru, sị: “Enweela akwụkwọ ntinye akwụkwọ na -abata Jamaica site na Canada kemgbe Gọọmentị Canada weliri mmachi na mba ụwa. njem. ” O kwuru na atụmanya dị elu maka ahịa Canada '' ime nke ọma n'oge oyi a '' na echekwala ihe karịrị oche 280,000. Dreamliner nwere ikike oche 298 bụ ụgbọ elu kacha ọhụrụ na ụgbọ elu Air Canada ma na-ebuga ya Jamaica na nke mbụ ya.
Captain Geoff Wall nwekwara obi ụtọ ịlaghachi, na -ekweta nnabata "n'ezie na -eme ka ọ dị anyị ka anyị na -alọta, yabụ ọ dị mma ịlaghachi." O kwuru mgbe COVID-19 gasịrị: "Ọ dị mma ịnwe ike ịpụ Canada, kpọghachite ndị njem nlegharị anya Canada na ndị obodo na Jamaica ka ha na ezinụlọ ha nọrọ, na-anụ ụtọ ihe na-abụkarị ebe anwụ na-acha na ile ọbịa."
Mgbe ọ bịarutere n'ụgbọ elu Condor, onye isi mpaghara JTB maka kọntinent Europe, Gregory Shervington kwuru na eburu ụgbọ elu ahụ maka afọ gara aga mana ọ kwaghachiri ọtụtụ oge n'ihi ọrịa na -efe efe. O kwuru na Condor nọchiri anya njikọ siri ike na Germany n'ime afọ iri abụọ gara aga “na ọ bụ ihe na-ebute ọbịbịa ndị ọzọ, gụnyere ụgbọ elu Mọnde na Zurich na Wenezde anyị ga-enwe Lufthansa ya na ụgbọ elu nwanne ya nwanyị Eurowings Discover na-abịaghachi na atọ na-abụghị. kwụsị ụgbọ elu. ”
Jamaica Hotel na Tourist Association (JHTA) na ọfịs onyeisi obodo Montego Bay anabatala ụgbọ elu ọhụrụ a. Onye isi oche nke JHTA, Nadine Spence nwere obi ụtọ na nlọghachi nke Air Canada, na -ekwupụta na "Canada bụ otu n'ime ebe kacha amasị anyị, na -enye ihe karịrị pasent 22 nke ndị niile bịara njem." O kwuru na nloghachi ahụ gosipụtara na enwere ntụkwasị obi na njem yana na "Jamaica bụ ebe a hụrụ n'anya."
Onye osote onye isi obodo, Richard Vernon “nwekwara obi ụtọ ịlaghachi ụgbọ elu ndị a.” Ọ sịrị: “Nke a dị anyị mkpa nke ukwuu; anyị na -erite uru dị ukwuu site na njem nlegharị anya ebe a na Montego Bay na ọtụtụ mmadụ enweghị ọrụ kemgbe March nke afọ gara aga na n'ihi nke a anyị nwere ike ịtụ anya na ndị mmadụ ga -alaghachi ọrụ. "